Mpanonta horonantsary 6 maimaim-poana ho an'ny Ubuntu | Ubunlog
Mpanonta horonantsary maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Ubuntu
Manohana mora foana ny tontolon'ny haino aman-jery i Ubuntu, tsy ny filalaovana feo sy horonan-tsary fotsiny fa koa ny fanampiana amin'ny famoronana ireo atiny ireo. Azontsika atao izao mamorona rakitra audio sy video mora foana ary miaraka amin'ny valiny matihanina avy amin'ny Ubuntu. Ary ny zavatra tsara indrindra momba izany dia ny fahafahantsika manao azy maimaim-poana.
Amin'ity tranga ity dia holazainay aminao ny momba izany mpamoaka horonantsary maimaimpoana azontsika alaina sy apetraka amin'ny Ubuntu. Ny fametrahana azy dia saika amin'ny alàlan'ny tahiry ofisialy ary manolotra ny fahafaha-mamorona horonantsary matihanina ary fomba fiaina mihitsy aza izy ireo, toy ny youtubers. Na izany aza, tsy maintsy milaza isika fa tsy misy ny rehetra, fa izy rehetra dia misy.
7 Mpanonta horonantsary iza no tokony hofidiko?
Kdenlive dia mpamoaka horonantsary feno tanteraka izay mampiasa tranomboky Qt. Kdenlive dia safidy tsara ho an'ireo mpampiasa mampiasa Plasma na fizarana amin'ny KDE, na dia azontsika atao aza ny mametraka ny programa na amin'ny Ubuntu na amin'ny rafitra miasa hafa toa ny Windows na macOS.
Kdenlive dia rindrambaiko maimaimpoana sy maimaimpoana tanteraka Azontsika atao ny mamakivaky ireo toeram-pivarotana ofisialy Ubuntu ary koa amin'ny alàlan'ny ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa.
Inona no hatao raha tsy mamaky kapila mafy na pendrive i Ubuntu
Ity mpamoaka horonantsary ity dia manana fanohanana roa. fandaharam-potoana maromaro, lisitry ny clip, fanaingoana azo ampifanarahana, vokam-peo ary fiovana ifotony. Kdenlive dia mamela ny fanondranana sy ny fanafarana endrika video isan-karazany, na maimaim-poana izany na tsia. Kdenlive koa dia mamela plugins sy sivana azontsika ampiasaina hamoronana vokatra tsara kokoa.
Kdenlive no safidy maimaim-poana sy tsy andoavam-bola tsara indrindra any ho any amin'ny fanovana horonantsary ao amin'ny Ubuntu, saingy tsy maintsy milaza ihany koa isika fa ny safidy sarotra indrindra any ho an'ny mpampiasa vao, izany no mahatonga azy hanana detractors ary tsy mety amin'ny mpampiasa maro izy io.
Kdenlive dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny terminal amin'ny alàlan'ity kaody manaraka ity:
PiTiVi dia mpamoaka horonantsary maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana izay azontsika apetraka amin'ny Ubuntu. Pitivi dia mpamoaka horonantsary izay mampiasa ny rafitra Gstreamer. Io dia ahafahantsika mamorona horonan-tsary mora avy amin'ny Gnome na birao mitovy amin'izany izay mampiasa fitehirizam-bokin'ny GTK. PiTiVi dia mpamoaka horonantsary feno tanteraka nefa izy io koa dia iray amin'ireo mpamoaka horonantsary izay mandany vola kely kokoa rehefa mamorona horonan-tsary, zavatra tsy maintsy raisintsika. Ity mpamoaka horonantsary ity dia mbola tsy manana ny kinova miorina voalohany saingy manana effets sy transitions betsaka hamoronana horonantsary misy anay. PiTiVi dia tsy misy mifanentana amin'ireo endrika horonantsary marobe fa misy izany manohana ireo endrika lehibe toy ny ogg, h.264 ary avi ankoatry ny hafa.
Ampidiro ny Java 8, 9 ary 10 amin'ny Ubuntu 18.04 sy ny derivatives
Azontsika atao ny mametraka PiTiVi ao amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny terminal, manatanteraka ity kaody manaraka ity:
OBS Studio dia programa maimaim-poana sy malalaka izay azontsika apetraka ao amin'ny Ubuntu sy ny rafitra miasa hafa. Ny OBS Studio dia nanjary malaza amin'ny maha-fitaovana lehibe amin'ny fanaovana horonantsary Ubuntu na fitaovana informatika hafa satria manana mpamaky efijery tsara. OBS Studio dia mpamoaka horonantsary tena tsotra izay mamela antsika hanambatra sary, horonan-tsary ary feo mora foana.
Mamela ny OBS Studio mamorona horonantsary amin'ny endrika flv, mkv, mp4, Mov, ts ary m3u8. Tsy dia misokatra ny format nefa eny mifanaraka amin'ny sehatra famoahana horonantsary an-tserasera. Ity mpamoaka lahatsoratra ity dia mamela antsika hanova horonantsary, fa tsy handefa fotsiny, na dia tsy maintsy milaza aza izahay fa ny ampahany amin'ny fanitsiana dia tsy feno toa an'i Kdenlive na Openshot.
Ary koa, tsy toy ny mpamoaka horonantsary hafa, Ny OBS Studio dia mifandray amin'ny sehatra streaming video mba hanaovana horonantsary mivantana. Ity farany dia nanamboatra azy io ho fitaovana malaza indrindra eo amin'ny youtubers, fitaovana azontsika apetraka amin'ny kinova Ubuntu. Amin'ity fametrahana ity dia tsy maintsy manatanteraka ity baiko manaraka ity fotsiny isika ao amin'ny terminal:
Shotcut dia mpamoaka horonantsary loharano maimaimpoana ary mitovy amin'ny Kdenlive sy OpenShot. Ity mpamoaka horonantsary ity dia natokana ho an'ny mpampiasa vao manomboka na dia manome vahaolana matihanina toa an'i Kdenlive aza. Ny iray amin'ireo zavatra manaitra indrindra ananantsika ato amin'ity mpamoaka horonantsary ity dia ny habetsaky ny tetezamita sy ny vokatra izay ao anatin'ilay mpanonta ary koa ny karazana audio sy video izay tohanan'ny programa.
Azontsika atao izao mametraka Shotcut amin'ny alàlan'ny fonosana haingana. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampandehanana ity manaraka ity ao amin'ny terminal:
Fa iray hafa amin'ireo hevitra tsara izay Hitanay ao amin'ny Shotcut ny habetsaky ny fampianarana misy hampiasa an'ity fitaovana ity. Ny iray amin'ireo fampianarana tsara indrindra amin'ny teny espaniola ho an'ny Shotcut dia nataon'ny Profesora Juan Febles avy amin'ny PodcastLinux, fampianarana video izay azontsika atao ny maka hevitra maimaim-poana ao amin'ny amin'ny alàlan'ny Youtube.
OpenShot dia mpamoaka horonantsary tsotra nefa feno, natokana ho an'ireo mpampiasa vao. OpenShot dia mpamoaka horonantsary multiplatform izay azontsika ampiasaina sy apetraka amin'ny macOS sy Windows. Izaho manokana dia ilay mpanonta horonantsary izay mampatsiahy ahy ny fitaovana fanaovan-tsarimihetsika Windows Movie, fitaovana iray izay niaraka tamin'i Windows ary nanampy tamin'ny famoronana horonan-tsary tamin'ny fomba tsotra. Mamela i OpenShot manampy vokany sy ny tetezamita; manana safidy multitrack ho an'ny audio ary rehefa vita ny asantsika dia azontsika atao ny manondrana azy amin'ny endrika rehetra tadiavintsika, Afaka mifandray amin'ireo sehatra toa ny YouTube aza isika, ka raha vantany vao noforonina ilay horonantsary dia alefan'ny OpenShot ity horonantsary ity ao amin'ny kaonty Youtube anay, Vimeo, Dailymotion, sns.
Ny safidy izay ananan'i OpenShot hanohana clip sy horonan-tsary hafa dia tena malalaka, mifanentana amin'ny endrika horonan-tsary rehetra sa farafaharatsiny malaza indrindra. Azontsika atao ny mametraka OpenShot amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal:
Cinelerra dia mpamoaka horonantsary teraka ny taona 1998 ho an'ny Gnu / Linux. Izy izay dia ny sehatra 64-bit voalohany mifanentana amina horonantsary tsy mifanaraka amin'ny Gnu / Linux. Cinelerra dia nanana fahombiazana lehibe nandritra ny taona voalohany satria mpanonta Lahatsary feno sy maimaim-poana izy io, saika miavaka amin'ny karazany. Na izany aza, rehefa nandeha ny fotoana dia nijanona ny fampandrosoana ary mpampiasa maro no nanapa-kevitra ny handao ilay tetikasa.
Mitohy ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao ary mivoaka tsikelikely ho an'ny Ubuntu ireo kinova vaovao. Cinelerra dia manana tontonana fanovana mizarazara, toa ny Gimp, manolotra fanovana tsy an-dàlambe ny horonan-tsary. Toy ny mpamoaka horonantsary hafa rehetra, Cinelerra dia manolotra vokatra sy fiovana horonantsary isan-karazany hamoronana horonan-tsary sy fampisehoana. Azontsika atao ny mametraka cinelerra amin'ny alàlan'ny SourceForge; vantany vao azontsika izany dia tsy maintsy ataontsika amin'ny alàlan'ny baiko ilay rakitra ./
Mpanonta horonantsary iza no tokony hofidiko?
Tsy izy rehetra no mpamoaka horonantsary misy an'i Ubuntu fa mpamoaka horonantsary miasa amin'ny Ubuntu izy ireo ary ny tsara indrindra misy mba hamoronana horonan-tsary matihanina. Raha tsy maintsy misafidy mpamoaka horonantsary aho dia tena hifidy an'i Kdenlive aho. Vahaolana tena feno sy maimaim-poana. Ary raha tsy azo atao izany (satria miadana ny solosainako, satria manana Gnome aho na satria tsy mila na inona na inona avy amin'ny KDE) dia nifidy ny Shotcut aho. Vahaolana tsotra nefa matanjaka izay manana tutorial maro karazana izay hanampy antsika hamorona horonan-tsary matihanina. Ary ianao Safidy inona no safidinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Mpanonta horonantsary maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Ubuntu
Tsy misy isalasalana Cinelerra
Tsy isalasalana fa safidy tena tsara 🙂
kakkin dia hoy izy:
Andao hojerentsika hoe iza no mety amiko, mila manao horonantsary misy fiovana somary sarotra aho, efa nampiasa kdenlive aho fa ho an'ny tetikasa tsotra VERY. Misaotra tamin'ny lahatsoratra, arahaba.
Mamaly an'i kakkin
Lorens dia hoy izy:
Ary ahoana ny amin'i Davinci? ?
Valiny tamin'i Lorens
Nicole dia hoy izy:
Ahoana no fampidinana azy
Valiny tamin'i Nicole
Amin'ireo voatonona ao amin'ilay lahatsoratra tsy isalasalana fa ny tsara indrindra dia ny Cinelerra GG, indrindra anio febroary 2020, satria ny ekipa izay naka azy io ankehitriny, ry zalahy tsara, dia manao zava-mahatalanjona amin'izany, ary miaraka amina famoahana vaovao isam-bolana.
Shotcut ho an'ny fanontana an-trano sy tsotra dia safidy tena tsara, ny kdenlive no mbola tadiaviko saingy tsy afaka ny ho teo foana aho, miaraka amin'ny hadisoana bebe kokoa noho ny fahombiazana ary miaraka amin'ny fikorontanan'ny asa ratsy noho ny fanakatonana tsy tapaka sy ny fianjeran'ny editor, ny 18.12 lasa marin-toerana, fa tamin'ny 19.04 dia lasa any amin'ny afobe indray ny zava-drehetra.
Manoro hevitra an'i Cinelerra aho hiasa toy ny pro sy Shotcut mba hanovana mora kokoa.
kewin dia hoy izy:
Mbola mila manonona anarana avidemux, olom-pantatra taloha iray hafa aho
Mamaly an'i kewin
Salama, avy amin'ny vondrona mpampiasa Avidemux amin'ny teny Espaniôla, izahay dia manoro hevitra an'ity mpamoaka horonantsary maimaim-poana sy mora ampiasaina ity. Avelako ho anao ny tranonkala https://avidemux.es/
Salama daholo, tiako ho fantatra hoe inona ilay tonian-dahatsary amin'ny Linux, mitovy kokoa amin'ny Freemake Video Converter izay ampiasaiko amin'ny Windows, nametraka an'i Cinelerra, Avidemux, Pitivi aho ... Nefa tsy vitako ny manao zavatra mitovy amin'izany Ataoko amin'ny Freemake Video Converter (hampiova finoana horonan-tsary avy amin'ny format .mkv, .avi, .wmv ... ho .mp4, manapaka horonan-tsary, manatevin-daharana azy ireo).
Iza amin'ireo no akaiky indrindra ny hevitrao?
Pet SIS dia hoy izy:
Salama. Raha hiovaova eo anelanelan'ny endrika horonantsary anananao HandBrake: https://handbrake.fr/ Tsy azoko lazaina aminao ireo ao amin'ilay lahatsoratra satria tsy fantatro izy ireo. Tonga eto marina aho mitady vaovao momba ireo mpanova horonantsary. Vintana!
Valiny amin'i Petsis
Misaotra ny valiny, fa tsy amin'ny fiovan'ny format ihany, mila mora ihany koa aho ny manapaka horonantsary, manatevin-daharana horonan-tsary maromaro ho iray na mihodina ... HandBrake (izay hitako farafaharatsiny, dia tsy mamela ny hiditra na hanapaka horonantsary ampahany amin'ny horonan-tsary
Manomboka amin'ny fotoana eto dia misy programa programa hanovana horonantsary ... nataonao nandany ny fotoako tamin'ny fametrahana azy aho ... mba jereo izay nosoratan'izy ireo
Jbern dia hoy izy:
Tsy misy fisalasalana fa misafidy an'i Avidemux aho, tsotra, mora ampiasaina ary misy valiny tsy mampino ho mpanova horonantsary maimaimpoana.
Ity ho an'ny ubuntu: https://avidemux.gratis/avidemux-linux/
Valiny tamin'i Jbern
Miguel Montalvan dia hoy izy:
Ankehitriny dia misy ihany koa ny Lightworks sy DaVinci Resolve.
Valiny tamin'i Miguel Montalván
Cinelerra, rehefa hitako dia nihemotra aho, tsy intuitive velively izany ary raha vao manokatra azy ianao dia tototry ny safidy an-tapitrisany ... Ny programa fanovana horonantsary tsara dia tsy tokony hanadino anao, fa hampirisika anao .. . FreeMake Video Converter dia ohatra tsara, Eny, tsy mamorona horonantsary izany, fa ny manova, manatevin-daharana horonan-tsary, manapaka azy… Mora be ny mampiasa azy, enga anie ka manana kinova Linux aho…
OpenShot, nanandrana namerina namerina 15 minitra novahany tamin'ny horonan-tsary izy, ary nijanona tao ... Raha tsy afaka manapaka horonantsary 15 minitra akory ianao dia vonoy ary andao handeha, rehefa vitako ihany asaovy miasa izy, ireo 15 minitra niverimberina (mitovy ny vahaolana, ireo kaody sy ny safidy ary ny audio dia navadika ho mp3 fa tsy AAC, ary manome ahy lanjan'ny rakitra betsaka kokoa noho ilay horonan-tsary manontolo ... Tsy azo ekena ... Ary mitovy amin'ny Handbrake , Pitivi ... Ny ShotCut ihany no namela ahy hanao izany amin'ny haben'ny arsiva tsy dia lehibe…
Al Gomez dia hoy izy:
Taorian'ny fianjerana niaraka tamin'i Sony Vegas dia nanapa-kevitra ny hifindra monina amin'ny rindrambaiko maimaim-poana aho satria mampiasa sehatra roa, Windows-Linux. Namaky hevitra maro momba ny mpanonta-dahatsary ho an'ny Ubuntu aho ary ilay resahina indrindra, farafaharatsiny ao amin'ny Youtube, dia ny Shotcut. Amin'izao fotoana izao, ary amin'ny filàna ilaina indraindray, dia ampiasaiko izany. Na izany aza, heveriko fa tena hisafidy an'i Cinelerra aho. Angamba somary sarotra kokoa nefa, miaraka amina fanoloran-tena kely (ary tsy misy tsindry), dia hahatratra ny zavatra nataoko tamin'ny programa manokana. Miarahaba.
Mamaly an'i Al Gómez
Tsy misy isalasalana fa ny Kdenlive no tsara indrindra
Karen Suarez dia hoy izy:
Te handraikitra horonantsary sy handefa sary amin'ny mozika aho
Valiny tamin'i Karen Suárez
vfrd dia hoy izy:
Ankehitriny ny rindrambaiko fanovana malaza dia TunesKit AceMovi. Ho an'ireo mpamoaka horonantsary tsy manana traikefa dia safidy tsara ity mpanonta video ity. Rehefa dinihina tokoa, ny fiasa dia feno ary ny fandidiana dia tena tsotra.
Mamaly an'i vfrd
Ahoana ny fametrahana Nextcloud 14 amin'ny Ubuntu 18.04 LTS sy ny derivatives?
Ahoana ny fomba hanampiana sary miverina amin'ny terminal Ubuntu